AOL ह्वाइटलिस्ट - कसरी AOL को साथ व्हाइटलिस्ट हुने
AOL को साथ तपाईंको ईमेल श्वेतसूची
मंगलवार, सेप्टेम्बर 11, 2007 मंगलवार, जुलाई 15, 2014 Douglas Karr
हुनसक्छ यो अझै पनि ठूलो मध्ये एक हो आईएसपी र ईमेल को बारे मा धेरै परिपूर्ण, AOL वास्तव मा एक अनौंठो पोस्टमास्टर सेवा अनलाइन छ। मैले तिनीहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्‍यो जब एक ग्राहकले रिपोर्ट गरे कि तिनीहरूसँग AOL ईमेल ठेगानाहरू मार्फत ईमेलमा मुद्दाहरू छन्। निश्चित रूपमा, हामीले पत्ता लगायौं कि हाम्रो अनुप्रयोगको आईपी ठेगानाहरू रोकिदै थिए।
त्यो केहि डरलाग्दो देखिन्छ, जस्तो कि हामी एक स्पामर वा केहि… तर हामी छैनौं। हाम्रो सबै ईमेलहरू लेनदेनको वा प्रकृतिमा आमन्त्रणीय हुन्। वास्तवमा कुनै मार्केटिंग ईमेल यी ठेगानाहरूबाट बाहिर आउँदैन। मैले राम्रो मित्र र छुटकारा दिने गुरु, ग्रेग क्रिओसलाई बोलाएँ, र उसले मलाई सिधै एओएलको पोस्ट मास्टरहरूको सम्पर्क जानकारीको साथ सेट गर्‍यो। AOL पोस्टमास्टर वेबसाइट। मैले तिनीहरूलाई कल दिएँ र तिनीहरूले मलाई अनब्लक गर्न र श्वेतसूचीमा लिन कस्ता कदमहरू चाल्न सक्छन् भनेर मलाई बताउँथे।
मैले पत्ता लगाए कि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या यो थियो कि हाम्रो प्रणालीले गलत उल्टो AOL ईमेल खाताहरूमा पठाउँदै थियो जुन हाम्रो उल्टो DNS लुकअप असक्षम गरिएको थियो। रिभर्स DNS एक आईएसपी को लागी तपाइँको डोमेन र कम्पनी जानकारी आईपी ठेगाना बाट आउँदैछ कि लगानि हेर्न को लागी एक साधन हो। यो बन्द गरेर, हामी एक स्पामर जस्तै लाग्यो। पर्याप्त नराम्रा ठेगानाहरूको साथ - एओएलले हामी को हौं भनी हेरौं। जब उनीहरूले हामी को हौं भनेर पत्ता लगाउन सकेनन्, तिनीहरूले हामीलाई रोक्नुभयो। बोध हुन्छ! म दोष दिन सक्दिन।
हामीले रिभर्स DNS सक्षम गरिसकेपछि, AOL ले ब्लक खसाल्यो। मैले हाम्रो बिक्री टोलीसँग पनि कुरा गरें र उनीहरूलाई एओएल ईमेल ठेगानाहरूसँग डेमो गर्न रोक्न भनेँ (तिनीहरू टाइप गर्न सजिलो हुन्, होइन त?)। ब्लक ड्रप गरेपछि, तपाईंलाई पोष्टमास्टर साइट मार्फत ह्वाइटलिस्टि forको लागि आवेदन दिन अनुमति छ। मैले कम्तिमा एक दर्जन पटक प्रयोग गरेको छु - तर द्रुत रूपमा तपाईले पत्ता लगाउनु भयो कि तपाईले बनाउनु भन्दा पहिले तपाईको बतखहरु प row्क्तिमा हुनु पर्छ:
हामीले प्रत्येक IP ठेगानाहरूमा रिभर्स DNS लुकअप सक्षम गर्‍यौं जुन हामीले ईमेल पठाउँदछौं।
हामीले AOL को लागी प्रतिक्रिया ईमेल ठेगाना सेट अप गर्नुपर्‍यो जब हामीलाई ईमेल लेख्नुहोस्। हामीले दुरुपयोग @ कन्फिगर गरेका छौं। हामी अझै पनि "त्रुटिहरू" लाई अनुकूलन ईमेल हेडर सेटिंगमा काम गरिरहेका छौं तर यो राम्रो सुरुवात हो।
अनब्लक भएपछि हामीले केही दिन कुर्नुपर्‍यो।
तपाईंको डोमेन तपाईंको सम्पर्क र प्रतिक्रिया लुप ईमेल ठेगानाहरूमा डोमेनसँग मेल खानुपर्दछ। तिमी सक्छौ तपाईंको FBL ईमेल ठेगाना AOL का साथ दर्ता गर्नुहोस्.
यदि तपाईं फरक डोमेन पाउनु भयो भने, तपाईं प्रत्येक को लागी आवेदन दिनु पर्छ।
तपाईले पेस गर्नुभएको ईमेल ठेगानाहरूलाई निगरानी गर्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईंले एक पुष्टिकरण लिंक क्लिक गर्नु आवश्यक छ उनीहरूको श्वेतसूची अनुरोधमा काम गर्नु अघि।
अन्तिम चरण प्रतिक्रियाको लागि पर्खनु हो। यदि तपाईं अस्वीकार हुनुभयो भने, तपाईं पोष्टमास्टर्स कल गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई सन्दर्भ आईडी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तिनीहरूलाई द्रुत रूपमा यसलाई हेर्न र के गलत हो भनेर हेर्न अनुमति दिनेछ। अतिरिक्त समय यो गर्न केहि समय!
म त्यस दिनको प्रतिक्षा गर्दैछु जब हामी यी ईमेलहरूलाई बाहिर धकेल्न सक्छौं ईमेल सेवा प्रदायकको प्रणाली ताकि हामीले यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन! म उनीहरूको लेनदेन ईमेल प्रणालीको आधिकारिक रिलीजको लागि पर्खिरहेको छु (जुन मैले परिभाषित गर्न मद्दत गरें!) साथै हाम्रो कम्पनीमा केही वृद्धिको लागि। हामी उनीहरूको छुट्याउने सेवाहरू जति चाँडो प्रयोग गर्न सक्दछौं, राम्रो!
एओएलसँग केहि राम्रा पोष्टमास्टर सेवाहरू छन्, तर म यसको सट्टामा हामीले टाउको दुखाइको सामना गर्नुपर्दैन। एक नोट, यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि छैन वा छैन मलाई त्यसले उनीहरूलाई रोकिदैरहेछ वा हामीलाई श्वेतसूचीमा लिने समस्या हो ... होइन हो। मलाई स्प्यामको बारेमा सतर्क कम्पनी देख्न र उनीहरूको ग्राहकहरूको हेरचाह गर्न मन पर्छ।
AOL लाई श्वेतसूचीमा पुर्‍याउन हामीसँग पर्याप्त मेलिंग ईतिहास हुनु भन्दा पहिले यसले केहि प्रयासहरू गर्‍यो, तर उनीहरूले केही प्रयास गरे।
तपाईंको व्हाइटलिस्ट अनुरोध, कोड कोड xxxxxxxx-xxxxxx को साथ, अनुमोदन भएको छ।
निश्चित हुनुहुन्न कि यदि तपाईंको ईमेलहरू ब्लक भइरहेको छ वा छैन? एक प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस् इनबक्स प्लेसमेन्ट निगरानी उपकरण ISP को लागि निर्दिष्ट मुद्दाहरू फेला पार्न र समस्या निवारण गर्न।
टैग: 250okAOLaol कालोसूचीaol पोस्टमास्टरaol स्वेतसूचीरोकिएको ईमेलfblप्रतिक्रिया लूपइनबक्स प्लेसमेन्टइन्टरनेट सेवा प्रदायकispरद्दी फिल्टरस्पामस्पाम गुनासोहरूस्पाम फिल्टर
अन्तर्क्रियात्मक मार्केटिंग भनेको के हो?